Home Wararka Farmaajo oo dagaal ku qaaday Rugta Ganacsiga iyo hogaankeeda?
Farmaajo oo dagaal ku qaaday Rugta Ganacsiga iyo hogaankeeda?
Farmaajoo oo adeegsanaya Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa weerar ku qaaday Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed iyo hogaankeeda. Isaga oo fulinaya amar ka soo baxay RW Rooble ayaa Hantidhawraha Guud ee Qaranka qoraal uu soo saaray waxa uu ku amray Wasaaradda Maaliyadda Xukumadda Faderaalka ah in la hakiyo lacag la siin jirey Bangiga Horumarinta Ganacsiga Soomaaliyeed iyo Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed.
Sida ka muuqata qoraalka hoos ku qoran, Qoraal ka soo baxay Xafiiska Hantidhowraha Guud ayaa lagu sheegay in tallaabadaan uu Xafiiska Hantidhawrku qaaday ay tahay mid lagu beekhaaminayo hantida dowladda iyo in la hubiyo in qarashka haatan ku jira gacanta dowladda loo isticmaalo adeegyada muhimka u ah muwaadiniinta iyo kobcinta awoodda dowladda.
Dhanka kale, warar hoose ayaa sheegaya in talabadaan uu qaaday RW Rooble ay salka ku hayso codsi kaga yimid Ganacsato ka soo jeeda beesha Ceyr oo uu hogaanka u hayaaan Maxamed Deelaaf iyo Xuseen Goleey kuwaas oo doonaya in ay ayaga gacanta ku dhigaan hogaanka Rugta Ganacsiga. Warar hoose ayaa sheegaya in ganacsatadaan ay u balan qaadeen Farmaajo dhaqaale uu ku galo doorashada hadii uu ka taqaluso hogaanka Rugta Ganacsiga. Halka Rooble la siiyay damaanad horumaris dhaqaale ah.
Halkan Hoose ka aqriso qoraalka uu soo saaray Hantidhowrka Guud.